Posted by တန်ခူး at 12:51 PM 19 comments:
ချစ်ခြင်းသက်သက်ဖြင့်သာ လက်တွဲခဲ့သော မောင့်ဆီမှ မျှော်လင့်မထားပဲ ရခဲ့သည့် ရနေသည့် ရနေဦးမည့် နွေးထွေးသည့်စာနာနားလည်မှု… ငြိမ်းချမ်းအေးမြသည့်မျှဝေခံစားမှု… မြဲမြံခိုင်ကြည်သည့်သစ္စာတရား ကိုယ်ချင်းစာတရား……တို့ အတွက် မောင့်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆိုလျှင် သူစိမ်းများ သိပ်ဆန်သွားမလား…။ ကျွန်မအား အချစ်ကို ခံစားနားလည်တတ်လာအောင် ဘ၀ကိုကျေနပ်ဝမ်းမြောက်တတ်လာအောင် ဖန်ဆင်းပေးခဲ့သည့် မောင့်ရဲ့ ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာအထိ့လုံခြုံနွေးထွေးသည့်မိသားစုဘ၀လေးနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာ ရရှိနိုင်ပါစေလို့ …။ ရေးခဲ့ဘူးသည့် ကဗျာလေးအား မောင့်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပါရစေ….
Posted by တန်ခူး at 11:58 PM 25 comments:
Posted by တန်ခူး at 9:29 PM 20 comments:
ခုတလော သတင်းစာတွေရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ကမ္ဘာကြီး စီးပွားရေးကျတဲ့ သတင်းတွေပဲ ပလူပျံနေတယ်။ နေ့ ချင်းညချင်းကို စီးပွားရေးက ကျလာတာ။ ကိုယ်လဲ သိပ်နားမလည်တဲ့ ကိစ္စမို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မသိတာလား သိသိနဲ့ မထူးတော့ဘူးဆို ထွက်လာတာလား… မြန်မာတွေတော့ ဒီနိုင်ငံကို ၀င်လာမစဲ တသဲသဲပဲ။ ဖောင်ဖျက်ပြီးမှ လာကြရမှာဆိုရင် မလာရသေးသူတွေ နဲနဲတော့ စဉ်းစားဖို့ဒီပို့ စ်ကို ရေးလိုက်ရတာပါ။
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၅ ၆လ လောက်က အတော်အဆင်ပြေသေးတယ်။ အိမ်ဘေးအိမ်က ကောင်လေးအလုပ်လာရှာတော့ ကိုယ်ကလဲ တတ်အားသမျှ အိမ်စာရိတ် မကုန်အောင် ကိုယ့်အိမ်မှာ နေခိုင်းပြီး ကူညီပေးရတယ်။ ရမလိုလို မရမလိုလိုနဲ့ကိုယ်က stayကုန်ခါနီးလေ စိတ်တွေပူ။ သူကတော့ ပြန်တောင် အားပေးနေသေးတယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်ရမှာ သေချာတယ်တဲ့။ တော်သေးရဲ့… stayကုန်ဖို့၃ ၄ ရက်လောက်လို ကပ်ရသွားတာ။
ဒါပေမယ့်… ခေတ်ကြီးက လပိုင်းအတွင်းပြောင်းသွားတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လ လောက်က ကိုယ့်ဆရာမ သမီးလေး အလုပ်လာရှာတော့ အတော် ထိုင်းသွားတယ်။ အံ့တောင် အံ့သြတယ်။ သူ့ ခမျာ အမေအိုကြီးလုပ်ကျွေးချင်သူဆိုတော့ ရစေချင်တာပေါ့။ ပထမပိုင်း အင်တာဗျူးတွေရလိုက်ပြီး နောက် stay တလကျတော့ အင်တာဗျူးကို မရတော့တာ။ ပွဲစားနဲ့ အပ်… ပွဲစားမကယ်နိုင်။ ဒီကြားထဲ… မလေးရှောင်ပြီး ပြန်ဝင်ရင် stay ရတယ် ပြောလို့ပြန်ဝင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်တော့ မရ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမလာခင် ဗီဇာကို ဒီက Agentကို လှမ်းလျှောက်ခိုင်းတာမို လို့ တဲ့။ PR ဖြစ်ဖြစ် citizen ဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံရင် ၀င်ခွင့် ထပ်ရတယ်တဲ့။ အချင်းချင်း လက်တို့ သတိပေးလိုက်ကြပါဦး။ နောက်ဆုံးတော့… အလုပ်မချိတ်မိပဲ ပြန်သွားရရော။ ငိုနေတဲ့ သူ့ ကို ဘယ်လို အားပေးရမှန်းကို မသိဘူး။ ကံဆိုးချင်တော့ စီးပွားရေးကျတဲ့ အချိန်မှာ ရောက်လာသလို ဖြစ်သွားတာ။
ဟိုတနေ့ က အီးမေးလ်တခု ရောက်လာတာ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကို အလုပ်လာရှာတဲ့ သူတယောက် အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီမှာတင် ဆုံးသွားတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းမှုဒဏ်က အတော်ဆိုးဝါးသွားပုံရတယ်။ ကလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့မိန်းမကို ထားပြီး အလုပ်လာရှာတာတဲ့။ အဲဒီနေ့ က သူတို့ မိသားစုလေး အကြောင်းတွေးပြီး ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် လာဖို့အစီအစဉ်ရှိသူများကို ကြိုသတိပေးပါရစေ။ အခြေအနေကို စုံစမ်းပြီးမှ လာကြပါ။ လက်ရှိအလုပ်ကို ထွက်စရာမလိုပဲ ခဏလာ ကြိုးစားလိ်ု့ ရတယ်ဆို ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ခေတ်က ပြန်ဆိုးစပြုလာတော့ မျက်စိမှိတ် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ထွက်မလာသင့်တော့ပါဘူး။ ခုလက်ရှိ တချို့ companyတွေတောင် လှုပ်တုပ်တုပ်ဆိုတော့ စောင့်ကြည့် လေ့လာကြပါဦးလို့ ။
နောက်တခု သတိပေးချင်တာ fresh graduate လေးတွေကိုပါ။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုပြီး … သင်တန်းတွေ လျှောက်တတ်နေမယ့် အစား အလုပ်တခုခုကို ၀င်လုပ်လိုက်တာ ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ အလုပ် တကယ်လုပ်ဖူးသူနဲ့ မလုပ်ဖူးသူ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုက မတူပါဘူး။ ပြီးတော့… အင်္ဂလိ်ပ်စာကို လေ့ကျင့်ပါ။ သင်တန်းမှာ အများနဲ့ လိုက်အော်ရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ပါးစပ်က အသံထွက်ပြောမှ နားက သေချာနားထောင်မှ အလေ့အကျင့်ရမှာပါ။
ကိုယ့်အခြေအနေက ဖောင်ဖျက်ရတော့မှ ရမယ့် အခြေအနေဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ သေချာလုပ်ပြီးမှ လာသင့်ပါတယ်။ အလုပ်တခု ရဖို့ ကို လျော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ ခုလို ကျပ်လာတဲ့အခြေအနေမှာ ကိုယ်က ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ထက်သာမှ အရွေးခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆို ဖီလစ်ပိုင်၊ တရုတ်၊ ကုလားတွေ အပြင် စင်္ကာပူပြိုင်ဘက်တွေက များလာတာမို့ကိုယ့်အရည်အချင်းကို သူတို့ ထက်သာအောင် သွေးထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေက တကယ်လုပ်နိုင်ပြီး အပြောမှာ ဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်တတ်လဲဆိုတာ ကိုယ်ပြောနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ကြပါ။ အဆင်သင့်ဖြစ်မှ ဖောင်ဖျက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
တွဲဖတ်စေချင်တဲ့ပို့ စ်- မြန်မာတချို့နဲ့ အလုပ်အင်တာဗျူး
Posted by တန်ခူး at 4:58 PM 24 comments:
Posted by တန်ခူး at 11:32 PM 43 comments:
Posted by တန်ခူး at 7:13 PM 24 comments:
Posted by တန်ခူး at 1:41 AM 29 comments:
မခိုးမခန့် လှမ်းပြုံးလို့ 
သူ့ အခိုးငွေ့ တွေထဲ
Posted by တန်ခူး at 12:24 PM 25 comments:
Posted by တန်ခူး at 10:35 AM 33 comments:
သားက ပေါင်ချိန်စက်ပေါ် ဟန်ကျကျ တက်ပြီး လူကြီးတွေ ချိန်သလို ဒိုင်ခွက်ကို ငုံ့ ကြည့်သည်။ ဒီအထိ ကျွန်မရော သူ့ အဖေပါ သူဘာလုပ်မလဲ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်မိသည်။ ပြီးမှ သူထမေးလိုက်တဲ့ မမျှော်လင့်တဲ့မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်မတို့ ရယ်မိကြသည်။ ဒိုင်ခွက်ကို ကြည့်ပြီး မေးသည့် မေးခွန်းက “မေမေ့ဘယ်နှစ်နာရီ ထိုးပြီလဲ” တဲ့။ လက်တံပါသည့် ဒိုင်ခွက်မှန် သမျှက နာရီတမျိုးထဲ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြတော့ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ နားတော့ ထောင်သည်။ နားလည်သလားတော့မသိ။
သားက သူနဲ့ရွယ်တူကလေးတွေနဲ့စာရင် ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှုနှေးကွေးသည်။ သူစိတ်ဝင်စားတာကို တစိုက်မက်မက် လုပ်နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့နေတတ်တာက သူ့ အဖေအတိုင်း။ ပထမတော့ ကျွန်မတို့ စိတ်ပူမိသေးသည်။ မေးခွန်းမေးလဲ သူဖြေချင်မှ ဖြေတတ်သည်။ ယောင်္ကျားလေး သဘာဝက ဒီလိုပဲ ဆိုမှ စိတ်ပူသက်သာရသည်။ သူ့ နဲ့ နှစ်တူမွေးသည့် မိန်းကလေးတွေက “ဖေဖေနဲ့ မေမေ ဘယ်သူ့ ပိုချစ်လဲ” ဆို အဖေရှေ့ ကျ ဖေဖေ၊ အမေရှေ့ ကျ အမေလို့ချွဲတတ်နားလည်တတ်နေချိန်မှာ သားကို အဲဒီမေးခွန်းမေးရင် “ဖေဖေချစ်ချစ်၊ မေမေချစ်ချစ်” လို့ ပဲ ဖြေတတ်သည်။ အဲလောက် နှေးကွေးသည့် ဖိုးရွှေလိပ်လေးပါ။
ခုတော့ ဖိုးရွှေလိပ်လေး အိပဲ့အိပဲ့ နဲ့ခရီးအတော်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး၊ အပေးနဲ့ အယူတွေ ဖြေးဖြေးချင်း နားလည်လာတော့ ကျွန်မတို့နဲနဲသက်သာလာသည်။ ဆိုဖါပေါ်က ခုန်ခုန်ချပြီး ကစားတတ်သည့် သူ့ ကို “ဆိုဖာပေါ်က ခုန်ချရင် သားသွားတွေ ကျိုးကုန်မှာပေါ့” လို့ကျွန်မခြောက်တာ ကြောက်တတ်လာခဲ့ပြီ။ နောက်တခါ မေ့တေ့တေ့ရှိရင် “သား ဆိုဖာပေါ်က ခုန်ချရင် ဘာဖြစ်မလဲ” လို့သတိပေးလိုက် ကျွန်မဘေးကို ငြိမ်ငြိမ်လေး လာထိုင်ပြီး “ဆိုဖာပေါ်က ခုန်ချတော့ဘူး… သားသား သွားတွေ ကျိုးလိမ့်မယ်” လို့ပြန်ရှင်းပြတတ်သည်။ တခါပြောလျှင် အမြဲစွဲအောင် မှတ်ထားသည့် ဥာဏ်ကတော့ အလွန်ကောင်းသည်။
တခုခု စိတ်ဝင်စားမိလျှင် အသဲအမဲ လုပ်တတ်သည့် သားက အီးအီးပါ၊ ရှုးပေါက်ဖို့ အလွန်ပျင်းတတ်သည်။ ဘယ်လို သင်ပေးပေး မရတော့ ကျွန်မတို့အခက်တွေ့ ရသည်။ ဒီတော့ ကျွန်မနဲ့ ခင်ပွန်း နည်းလမ်းရှာရတော့သည်။ သားက အသန့် အပြန့် အလွန်ကြိုက်သည်။ သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ တခုခု ပေကျံသွားတာနဲ့တစ်ရှုးနဲ့သုတ်မယ်လို့အော်နေတတ်သည်။ ရေချိုးဖို့ ပျင်းရိနေလျှင် “ဟင်… သားသား တကိုယ်လုံး မဲတူးချိတ်နေတာပဲ” လို့ သာပြောလိုက် ချက်ချင်းထပြီး “သားသား အသားရောင်ဖြစ်အောင် ရေချိုးမယ်” ဖြစ်ရော။ ဒီတော့ ဒီနည်းကို ပဲ ပြန်သုံးဖို့ ကြိုးစားတာ အောင်မြင်သွားသည်။ သူ့ အဖေက “သားသား အီးအီးပါပဲ အောင့်ထားရင် သွားကြီးတွေ နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ မဲမဲကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်” ဆိုတော့ သူယုံသွားသည်။ “မေမေ သားသား ရှုးပေါက်မယ်… သားသား ရှုးတွေ အောင့်ထားရင် သွားကြီးမဲမဲဖြစ်” လို့ အီးပါ ရှုးပေါက်တိုင်း ပြောတတ်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် သူမမြင်အောင် လက်မထောင်မိသည်။ အောင်မြင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ခံမလဲတော့ မသိ။
ဟိုတခါ အိပ်ဖို့ ကို ကောင်းကင်အရောင်နဲ့သိပ်တဲ့နည်းကတော့ သိပ်မခံလိုက်။ ခုဆို ညရောက်လို့အိပ်ဖို့ပြောမရရင် “သားသားရေ… ကောင်းကင်ကြီးဘာရောင်” လို့မေးလိုက် “အပြာရောင်” လို့လူလည်ကျပြီး ပြောတတ်လာသည်။ သားက နှေးတော့ သူ့ တိုးတက်လာသည့် ခြေလှမ်းလေးတွေက မြင်သာသည်။ ဒီခြေလှမ်းလေးတွေကို စောင့်ကြည့်ရတာပဲ ကြည်နူးခြင်း တမျိုးပင်။
အပေးအယူက အတော်လေး သဘောပေါက်လာသည်။ ညဖက်သိပ်ရင် သူ့ ဘက်ကို အဖေရော အမေရော လှည့်နေမှ ကြိုက်သည်။ ခေါင်းကြီးကို အတင်းဆွဲဆွဲ လှည့်တဲ့ အမူအရာကို ပြင်ချင်တော့ “မေမေ ဒီဘက်ကို လှည့်ပါ ခင်ဗျ” လို့ပြောမှ လှည့်မယ်လို့အပေးအယူ လုပ်ရသည်။ ခုဆို ညကြီးသန်းခေါင် တရေးနိုးလို့အဖေအမေက တဘက်လှည့်အိပ်ရင်တောင် “ဖေဖေ ဒီဘက်လှည့်ပါ ခင်ဗျ” လို့ထထတောင်းဆိုတတ်လို့ကျွန်မတို့အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့တခွိခွိ ရယ်မိသည်။ ကွန်ပြူတာကစားနေလို့တခုခု အကူအညီလိုရင်လဲ “ဖေဖေ လာပါ ခင်ဗျ” လို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ခိုင်းတော့ အတော်ကို ဟုတ်နေသည်။ ခါတိုင်းက အဖေကို ချီချီခိုင်းတတ်တာလဲ ပျောက်ပြီ။ “သားချီခိုင်းရင် အိမ်မှာနေခဲ့ မလိုက်ခဲ့နဲ့ ” ဆို နားလည်ပြီး လမ်းလျှောက်သည်။
အဖေ၊အမေနဲ့ က ပိတ်ရက်နဲ့ညနေပိုင်းမှ တွေ့ ရတော့ တွေ့ ရချိန်လေး အဖေ၊အမေ ပျောက်သွားမှာ အလွန်ကြောက်တတ်တာ သနားစရာကောင်းသည်။ တခါတလေ သူ့ အဖေက ပိတ်ရက်တွေ အရေးပေါ် အလုပ်ရှိလို့ သွားရလျှင် မျက်နှာမကောင်း။ ဒီတော့ သူ အိပ်ရာနိုးပြီး သူ့ အဖေ မနိုးသေးလျှင် အိပ်ခန်းတံခါးကို သွားသွားချောင်းရသည်။ သူမသိအောင် သူ့ အဖေ ထွက်သွားမှာ စိုးလို့ ။ ကျွန်မတို့ ကလဲ ဒီအခွင့်အရေးလေး အသုံးချပြီး သူ့ ကို ဆုံးမရသည်။ “သားသား အဲလို ဆိုးရင် ဖေဖေရုံးသွားမှာနော်” ဆိုရင် ချက်ချင်း လိမ္မာသွားတတ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလ လောက်က စာရေးပျင်းတဲ့ သားကြောင့် ကျွန်မ အတော် ဦးနှောက်ခြောက်ခဲ့ရသည်။ မိဘဆရာတွေ့ ဆုံပွဲမှာ ဆရာမက သားစာရေးတဲ့ စာအုပ်ပြတော့ ငိုတောင်ငိုချင်သွားသည်။ နံပါတ် ၀မ်း ရေးတဲ့ အကွက်မှာ ၀မ်းမရေးပဲ သူ့ စိတ်ကြိုက် လက်စွမ်းပြထားသည့် Merlion ပုံတွေ။ ဆရာမက အိမ်မှာ ကျင့်ပေးဖို့ပြောတော့ ကျွန်မရော၊ သူ့ အဒေါ်ပါ ကျင့်လိုက်ရတာ။ သူက A ရေးဆိုလဲ Merlion၊ 1 ရေးဆိုလဲ Merlion။ (သား Merlion ပုံ တကယ်ဆွဲတတ်တာပါ။ ပန်းချီ ၀ါသနာ ပါလွန်းပြီး သူ့ အတွေးနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ကျွန်မပို့ စ်တခု အနေနဲ့တင်ပါဦးမယ်) သု့ အဖေကတော့ တို့ တွေလဲ ဒီအချိန်တုန်းက စာစရေးသေးတာမှာ မဟုတ်တာလို့စိတ်ကိုလျော့ခိုင်းသည်။ သားက သူစိတ်မပါလျှင် ဘယ်လို လုပ်ခိုင်းခိုင်းမရ။ တကယ်တော့ သူ့ ခေါင်းထဲမှာ ABC, 123 တွေက ရှိပြီးသား။ သူစိတ်ပါလာလျှင် မသင်ရသေးတာတောင် သူ့ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ချရေးပြတတ်တော့ အံ့သြစရာ။ အဲဒီ လေးလအတွင်း စာရေးလာချင်သည့် စိတ်လေးက ဘယ်ကဘယ်လို ရောက်ခဲ့သည်မသိ။ သူစိတ်ပါတော့လဲ ချောလို့ ။ ဟိုတနေ့ က ကျွန်မသူ့ ဆရာမနဲ့ တွေ့ တော့ 1 to 10 ထိရေးတတ်ပြီ။ သိပ်လိမ္မာတာတဲ့။ တော်သေးရဲ့။
သားက ပန်းတိမ်မတတ်ခင် ရွှေပိုးကလဲ သင်ချင်သူ။ Sunday School မှာ ၀လုံးလောက်ကို ရင်မခုန်တော့။ လက်ရေးလေးတွေ ၀ိုင်းစေချင်လို့ဝလုံးကို ထပ်ခါထပ်ခါရေးခိုင်းလျှင် စိတ်သိပ်မရှည်။ သူတတ်ပြီးသားပေါ့။ ခုဆို ကကြီး၊ ခခွေး အဆင့်လောက်တောင် မဟုတ်ပဲ အဘ၊အမ၊ဆရာမ… ဒီလို စာလုံးလေးတွေကို လှမ်းချင်သူ။ စာလုံးပေါင်းတွေလဲ ကကာကားလောက် မဟုတ်တော့ပဲ အဖေ၊အမေ၊အဘိုး၊အဘွား နာမည်တွေ ကိုပေါင်းချင်သူ။ သူ့ နာမည်နဲ့ကျွန်မနာမည်ကို မြန်မာလို ကောင်းကောင်း ပေါင်းဖတ်တတ်နေပြီလေ။
သားလို နှေးနှေးကွေးကွေးလေးတောင် အချိန်တန်တော့ သူ့ အတိုင်းအတာနဲ့ သူ ခရီးပေါက်တာမို့ကျွန်မ(အရင်က)လို စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ မိဘတွေများရှိရင် မစိုးရိမ်ဖို့ဒီပို့ စ်လေး ရေးရတာပါ။ သူ့ အချိန်ရောက်ရင် အားလုံးက အဆင်ပြေသွားမှာမို့စိတ်ဝင်စားစရာ ခြေလှမ်းလေးတွေကို စောင့်ကြည့်ရင်ခုန်ကြပါစို့ ….။
(စာကြွင်း- ကျွန်မက သားကို ချစ်လွန်းလို့သားအကြောင်းလေးတွေ ဝေမျှ ပေးရာကနေ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်ကို လာလည်သူ တချို့ မှာ သားပရိသတ်လေးတွေလဲ ပါနေတာ သတိထားမိတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိပါတယ်… သားအကြောင်းပို့ စ်လေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာလို့ လွမ်းနေသူတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဒီပို့ စ်လေးကို တင်လိုက်ပါတယ်နော်… သားတို့ ကျောင်းမှာ ငါးလေးကို အလှခြယ်နေတဲ့ သားပုံလေးကိုလဲ ဒီပို့ စ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…)
Posted by တန်ခူး at 9:55 AM 29 comments:
ဘလော့ဂ်သူငယ်ချင်းလေး သက်ဝေက အမှတ်တရ တက်ဂ်ပေးထားတယ်… ပထမဆုံးများတဲ့… သက်ဝေရေ တို့ ကို သတိရတာ ကျေးဇူးနော်… ခက်တာက ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေဆို အဖြစ်အပျက်သက်သက်ပဲ သတိရပြီး အဲဒီထဲက data တွေ အကုန်မေ့… ဒါပေမယ့် သတိရတဲ့ အထဲက ပထမဆုံးလေးတွေကို ရေးပေးလိုက်တယ်နော်…
မိသားစုထဲကို ပထမဆုံးရင်သွေးအဖြစ် ရောက်လာလို့နဲနဲသိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကျောင်းသွားချင်တာ… အိမ်မှာပျင်းတာကို… ပထမဆုံးတက်ရတဲ့ကျောင်းလေးက ဒေါ်ယုယုမွန် မူကြို(ဟိဟိ… နာမည်မှားရင်မှားနေလိမ့်မယ်)… ခုန်ပေါက်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ သွားခဲ့တာ…
သူငယ်တန်းဆိုတော့ ကျောင်းသူကြီးဖြစ်ပြီဆို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့အဖြူအစိမ်းလေး ၀တ်ပြီး ကော့ကော့ ကော့ကော့နဲ့တက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းက လသာ၂… တက်ခဲ့ရတဲ့ အတန်းက သူငယ်တန်း… တန်းခွဲက ခ လား ဂ လား… မေ့တေ့တေ့…
အင်း… အထက်မှာနိဒါန်းချီခဲ့သလိုပဲ… ဆရာမနာမည်တော့ မေ့ပြီး ဆရာမ ပုံစံတော့ သတိရနေသေးတယ်… မျက်မှန်နဲ့ … ဆံပင်မှာ လှိုင်းတွန့် လေးတွေနဲ့ … နာမည်မှာ မြင့် ပါသလိုပဲ… လသာ ၂က ဘော်ဒါတို့ ရေ… ကူစဉ်းစားပေးပါဦး…
သူဇာမောင်မောင်တဲ့… မျက်မှန်လေးနဲ့ ဆံပင်တွန့် တွန့် လေးနဲ့ … အမြဲပြုံးပြီး သဘောအရမ်းကောင်းတာ… သူကတော့ မှတ်မိပါဦးမလားမသိ… (ဆရာမနာမည်ကျတော့ မေ့ သူငယ်ချင်းနာမည်ကျတော့ သတိရတယ်နော်… အရမ်းဆိုးတာ… ငယ်ငယ်တုန်းကပြောပါတယ်)
ငယ်ကတည်းက ရပ်ကွက်ထဲ ရွာရိုးကိုးပေါက် ဆော့နေတဲ့သူဆိုတော့ ယောင်္ကျားလေး ကစားဖော်တော့ ရှိခဲ့တယ်… ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတော့ မဟုတ်ဘူး… အဖေက ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ဝေးအောင် မိန်းကလေးကျောင်းတွေမှာပဲ ထားခဲ့တာ… ဆယ်တန်းကျမှ ၀ိုင်းမှာ ကောင်လေးတယောက်ကို သူငယ်ချင်း စတော်ခဲ့တာ… နာမည်က အောင် တဲ့… နာမည်အစအဆုံးတော့ မဟုတ်ဘူး….
အဖေက ငယ်တုန်းက ကျောင်းစာက လွဲလို့တခြားမဖတ်ရ… အိမ်က အဒေါ်ဆီက အဖေမသိအောင် ခိုးဖတ်တဲ့ ပထမဆုံးသောစာအုပ်က ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည်…ခိုင်
(သားကလဲ အရမ်းကြိုက်… အမေနဲ့ တူတာလေ)
ရှက်လိုက်တာ… ၅တန်းထိ စာနဲ့ ပတ်သက်လို့ဘာဆုမှ မရဖူးဘူး… ဘယ်ရမလဲ… အဆော့မက်နေတာလေ… ၆တန်းမှ ပညာရည်ချွန်ဆု စရတာ… ပထမဆုံးရဘူးတဲ့ဆုက အိမ်ရှေ့ က ကွင်းကြီးထဲ လွတ်လပ်ရေးကစားပွဲမှာ အပြေးပြိုင်ပွဲ ပထမဆု… အိမ်ကမသိအောင် သွားပြိုင်တာ… ပျောက်လို့ လိုက်ရှာပြီး စပီကာထဲက ကိုယ့်နာမည်ကြီး ဆုရတယ်ဆို အော်မှ အဖေက ဒုတ်နဲ့ လိုက်လာတာ… ဆုလေးတောင် မှတ်မိသေး… အစိမ်းရောင်ပလပ်စတစ်ရေခွက်လေး….
သူငယ်တန်းတုန်းက ကျောင်းအသွားဆို အဖေက လိုက်ပို့ ပေးတယ်… ကျောင်းအပြန်ကျ ဦးလေးနဲ့ အတူ ဘတ်စ်ကား စီးရတာ… နံပါတ်တော့ မေ့သွားပြီ… အဲဒီ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေ ခုထိရှိတုန်း…
သနားပါတယ်… အားနာတယ်… သက်သက်ညှာညှာ ပြောလိုက်မယ် ကျွန်မမှာချစ်သူရှိတယ်….ရှင်ငရဲကြီးလိမ့်မယ်…အယ်….အယ်…အယ်…..
အဒေါ်ချော့သိပ်နေကျသီချင်းလေ…အဆုံးသတ်နားကျ မဆွဲနိုင်လို့ အယ်လိုက်တာ… အဲဒါကို မိဘတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းက ချစ်စရာကောင်းလို့ ဆို အမြဲဆိုပြခိုင်းတယ်… သီချင်းတခါဆိုပြပြီးရင် ချိုချဉ်တွေ စွန့် တော့ ကိုယ်ကလဲ ဘယ်နှစ်ခါဆိုခိုင်းဆိုခိုင်း….
တူးတူးရဲ့ ပထမဆုံးအခွေ… အခွေနာမည်တော့ မေ့သွားပြီ… သီချင်းတွေတော့ ခုထိ အလွတ်ရတုန်း…
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်… ခုထိ တခါမှ မ၀ယ်ဖူးဘူး… အိမ်က အမျိုးသား ၀ယ်တာတွေပဲ ကြည့်တာ….
အကယ်၍သာ တဲ့… ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်း၊မြတ်မွန်နှစ်ကိုယ်ခွဲ… မင်းသမီးရော မင်းသားရော ဇာတ်လမ်းပါ ကြိုက်လွန်းလို့ခုထိမှတ်မိနေတုန်း…
အီစီကလီ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် တွေဖယ်ပြီး နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ဘ၀တလျှောက်လုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရီးစားထားခဲ့တဲ့နှစ်က ကျောင်းပြီးမှပါ… (အဲဒီရီးစားနဲ့ ပဲ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာပေါ့)
အရှည်ကြီးပဲ… အဖြေပြန်ပေးတာက နဲနဲ… အဲဒီတုန်းက သူက အလုပ်ထဲ အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေချိန်ဆိုတော့ အားပေးမိတာများများ… နဂိုကလဲ စာရေးဝါသနာပါသူဆိုတော့ ပထမဆုံးရီးစားစာဆို အပြတ်ရေးတာ နှစ်မျက်နှာဖြစ်သွားတယ်…
ကဗျာနာမည်လေးတော့ မေ့သွားပြီ… တစုံတယောက်အတွက် အမှတ်တရ သူငယ်ချင်းတွေ စုထုတ်ခဲ့တာ… တကယ့်ကို အမှတ်တရပါပဲ…
မြင်းခြံ… သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြို့ လေးပေါ့… တမာပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ … သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ အညာသူလေးတွေရှိတယ်… ပြီးတော့…စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို ဖူးမျှော်လို့ ရတယ်လေ….
စင်္ကာပူ… သိပ်စိတ်ညစ်ခဲ့တာ… မိဘနဲ့ လဲဝေး ချစ်သူနဲ့ လဲဝေး… တနေ့ တနေ့ ငိုလိုက်ရတာ… အဆောင်ရှေ့ က ပိတောက်ပင်ကြီးပွင့်တော့လဲ မျက်ရည်ဝဲ… အစားအသောက်တွေ မစားနိုင်တော့လဲ မျက်ရည်ဝဲ… အင်း… ခုတော့လဲ… နေသားကျလိုက်ရတော့တာပေါ့….
သီးစုံချဉ်ရည်… အဒေါ်က အဲဒီဟင်းနဲ့လက်တည့်စမ်းခိုင်းတာ… ကောင်းတယ်လို့ ချီးကျူးခံရတယ်…ဟဲဟဲ… ခုထိလဲ ကောင်းတုန်း…တကယ်ပြောတာ…
စစ်တိုက်တိုင်းကစားတုန်းက လက်သေနတ်နဲ့ ပစ်တာလေ…
ရုပ်ရှင်ရုံ… ရုပ်ရှင်သရဲလေ… တမျိုးမထင်နဲ့ ဦး… သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါ….
မေဓာဝီ… အရေးအသားလေးတွေ ညက်လွန်းလို့မြန်မာစာတော်လွန်းလို့စွဲသွားတာ… ရုံးရောက်တာနဲ့ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တာသူပဲ… ခုတော့ ခဏနားထားတယ်… (ပြောရင်းလွမ်းသွားပြီ မေရေ)
ကိုပေါ နဲ့ က အရင်က ရင်းနှီးလက်စ… ဘလော့ဂါဖြစ်မှတော့ မဟုတ်ဘူး… ဘလော့ပေါ်မှာ လူချင်းမမြင်ဘူးပဲ ပထမဆုံးရင်းနှီးရတာတော့ သက်ဝေပေါ့… စိတ်ထဲမှာ အပြင်က ကိုယ်ခင်လက်စ သူငယ်ချင်း တယောက်ယောက်လို့ ခုထိထင်တုန်း…
Posted by တန်ခူး at 9:28 AM 26 comments: